အင်းတော်မြို့နယ်တွင် ကုန်တင်ယာဉ်ပေါ်မှ ကျပ်သိန်းပေါင်း တစ်သောင်းကျော်တန်ဖိုးခန့်ရှိ မူးယ?? - Yangon Media Group
အင်းတော်၊ ဧပြီ ၂၇ – စစ်ကိုင်း တိုင်းဒေသကြီး အင်းတော်မြို့နယ် နဘားလမ်းဆုံတွင် ကုန်မျိုးစုံတင် ဆောင်လာသော ယာဉ်ပေါ်မှ ကျပ် သိန်းပေါင်း တစ်သောင်းကျော် တန်ဖိုးရှိ မူးယစ်ဆေးဝါးများ ဖမ်းဆီး ရမိကြောင်း ကသာမူးယစ်တပ်ဖွဲ့စု (၆)မှ သိရသည်။
ဖြစ်စဉ်မှာ ကသာ မူးယစ် တပ်ဖွဲ့စု (၆)မှ တပ်ဖွဲ့ဝင်များသည် ဧပြီ ၂၆ ရက် နံနက်ပိုင်းက လှည့် ကင်းဆောင်ရွက်နေစဉ် မန္တလေး ဘက်မှ ယာဉ်မောင်းမြင့်ဇော်ဦး(ခ) မျိုးဇော်ဦးမောင်းနှင်ပြီး မင်းမင်းဦး (ခ) မင်းဦးနှင့်ငုဝါလှိုင်တို့ လိုက်ပါ လာသည့် ကုန်မျိုးစုံသယ်ဆောင် လာသောယာဉ်အား ရပ်တန့်စစ်ဆေး ရာ ယာဉ်ပေါ်မှ ဘိန်းဖြူဆပ်ပြာ ခွက် ၈၃၆ ခွက်နှင့် စိတ်ြ<ွကဆေး ပြား ၄၅၇၅ဝ စုစုပေါင်း ကာလတန် ဖိုးကျပ် သိန်း ၁ဝ၆၄၇ ဒသမ ၅ ခန့် ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
ဖြစ်စဉ်နှင့်ပတ်သက်၍ မူး ယစ်ဆေးဝါးများနှင့်အတူ ဖမ်းဆီး ရမိသော ယာဉ်ပေါ်ပါရှိသူ ယာဉ် မောင်းမြင့်ဇော်ဦး(ခ) မျိုးဇော်ဦး၊ မင်းမင်းဦး(ခ)မင်းဦး၊ ငုဝါလှိုင်တို့ ကို အင်းတော်နယ်မြေ ရဲစခန်းမှ မယ(ပ)၄၆/၂ဝ၁၉၊ ၁၉(က)/ ၂၁-တို့ဖြင့် အမှုဖွင့်အရေးယူထား ကြောင်း စခန်းမှူး ဒုရဲမှူးသက်တင် ဦး၏ ပြောကြားချက်အရ သိရ သည်။
'ကြွေးမြီထောင်ချောက်'မှာ တရုတ်အတွက်ရော BRI အတွက်ပါ မသင့်တော်ကြောင်း အီးယူဆိုင်ရာ တရုတ်သံအမတ်
ပို့ကုန်ရငွေသွင်းရန် ကျန်ရှိသည့် ကုမ္ပဏီ ၄ဝ စာရင်း စီးပွားကူးသန်း ဝန်ကြီးဌာန ထုတ်ပြန်
အနံ့ဆိုးကြောင့် ဒေသခံများ ဆန္ဒဖော်ထုတ်သည့် ဒဂုံဆိပ်ကမ်းမြို့နယ်မှ ငါးပေါင်းမှုန့်စက်ရုံကိ??
ရန်ကုန် တိရစ္ဆာန်ဥယျာဉ် (၁၁၂) နှစ်ပြည့် အထိမ်းအမှတ် ကလေးသူငယ်များ ရန်ပုံငွေပွဲကို ခိုင်နှင်း